Global Voices teny Malagasy » Ny tantara lavaben’ireo poeta revolisiônera tao Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jona 2021 15:55 GMT 1	 · Mpanoratra The Irrawaddy Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge, Myanmar Spring Revolution
Ity lahatsoratra  dia navoaka voalohany tao amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao tsy miankina ao Myanmar, ary nokiraina sy naverin'ny Global Voices navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Miaramila an-jatony avy amin'ny fitondrà-miaramila no nisambotra an'ilay poeta Khet Thi ny harivan'ny 8 May. Ny andro taorian'io, maty izy. Voalaza fa nangataka tamin'ireo manampahefana ny vadiny mba hahazo alàlana haka ny vatana mangatsiakany tao amin'ny Hôpitaly Monywa ; nesorina daholo hanaovana fitsirihana ny taova rehetra tao anatiny.
Mihoatra ny ampolony ireo poeta naneho firaisankina tamin'ny vahoaka hanohitra ny fitondràna miaramila  no nogadraina koa tao Yangon, tao Pathein Ayeyawady ary Myeik Taninthayi.
Taorian'ny nanonganana ilay mpanjaka farany tao Myanmar, ny Mpanjaka Thibaw , sy nandefasana azy hatao sesitany, nanoratra tononkalo ho fanandratana ny fitiavan-tanindrazana ireo poeta nalaza tao Mandalay, renivohitry ny fanjakana, isan'ireny i Saya Pe, Sebunni Sayadaw, U Kyawt ary Maunghtaung U Kyaw Hla. Tsy nionona fotsiny tamin'ny fitolomana tamin'ny alàlan'ny penina i Saya Pe fa nandeha nankany aminn'y Fanjakàna Shan mba handray sabatra. Maty tany izy. Maunghtaung U Kyaw Hla koa no poeta voalohany voasambotra nandritra ny fitondran'ny mpanjanatany noho ireo tononkalony mankahala ny mpanjanatany.
Ny poeta nalaza sy nahazo loka be indrindra nandritra ny vanimpotoanan'ny fanjanahantany dia i Thakhin Kodaw Hmaing , fantatra koa tamin'ny anarana hoe Maung Lun, izay nilaza fa hiady amin'ny alàlan'ireo tononkalony ho an'ny fahaleovantenan'ny firenena. Voaporofo fa natanjaka ny peniny tamin'ny fametrahana ny fitiavan-tanindrazana tany am-pon'ny vahoaka tao Myanmar.
Tamin'ny 1941, ny lazany amin'ny maha-nasionalista mpanohitra ny fanjanahantany azy sady lehiben'ny Doh Bamar Asiayon  (ny We Burmans Association) dia nahazoany toerana iray tao anaty lisitr'ireo manampahefana britanika, “ny lisitra Burma,” nahatonga azy ho “fahavalom-panjakana.” Nitàna andraikitra goavana tamin'ny ady fitakiana fahaleovantenan'i Myanmar ilay vondrona, nampitambatra ireo rantsana nasiônalista sy ireo ideôlôjia vaovaon'ny pôlitika no sady nampitombo ny fahatsiarovantena ara-politika.
Nandritra ny vanimpotoana nitondran'ny governemantan'ny Ligim-panafahan'ny vahoaka manohitra ny fasista  taorian'ny fahaleovantena, fantatra tamin'ny asan-dry zareo nanohanany ny hetsik'ireo mpianatra, mpiasa ary tantsaha ireto poeta ireto: Daung Nwe Swe, Ne Thway Ni, Maung Yin Mon, sy ny maro hafa, hatramin'ireo tononkalo manohitra ny ady sy ireo teny mananihany an'ireo mpitàna birao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/06/13/152936/
 fitondràna miaramila: https://globalvoices.org/special/myanmar-coup-2021/
 Mpanjaka Thibaw: https://en.wikipedia.org/wiki/Thibaw_Min
 Thakhin Kodaw Hmaing: https://en.wikipedia.org/wiki/Thakin_Kodaw_Hmaing
 Ligim-panafahan'ny vahoaka manohitra ny fasista: https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Fascist_People%27s_Freedom_League